के अनुप्रयोगमा बन्द हुँदा आईओएसमा ब्याट्री ड्रेन उच्च छ? | आईफोन समाचार
के अनुप्रयोगमा बन्द हुँदा आईओएसमा ब्याट्री ड्रेन उच्च छ?
हामीलाई शुद्ध तर्क के लाग्छ, अब यो बाहिर जान्छ कि यो हाम्रो विरुद्ध हुन्छ। को आईफोनमा ब्याट्री नाली यो एक समस्या हो जुन हामी सबैलाई चिन्ता गर्छ जो प्रयोगकर्ताहरू हुन्। र हामी आशा गर्दछौं कि एप्पलले आईफोन of को अर्को अपडेटको साथ अंशको रूपमा यसलाई समाधान गर्ने छ, यो क्षणको लागि यो हामीसँग भएको कुरासँग अनुकूल छ। तरिकाहरू र सेटि changesहरूमा साना परिवर्तनहरू प्रयोग गरेर ब्याट्री लामो समयसम्म पुग्ने दिशामा लामो यात्रा गर्छ, तर कहिलेकाँही ती युक्तिहरू उल्टो हुन्छन्। के तपाइँ जहिले सोच्नुहुन्छ कि अनुप्रयोगहरू बन्द गर्दा आईओएस मा ब्याट्री खपत कम भयो? ठिक छ, हुनसक्छ तपाईं गलत हुनुहुन्थ्यो।
अधिक अनुप्रयोगहरू खुला छन् भनेर सोच्न को तर्क, ठूलो आईओएस मा ब्याट्री नाली यो एप्पलको मोबाइल अपरेटिंग प्रणालीमा धेरै राम्रो काम गर्दैन। कारण तिनीहरूको अभिनयको तरीका र उनीहरूको विशेष कामकाज हो। जे होस् तल म सबै कुराको कारण बताउनेछु, सायद यो चिप परिवर्तन गर्न सजिलो छ, र यदि हामी आईफोनमा ब्याट्री बचत गर्न चाहान्छौं, केवल ती अनुप्रयोगहरू बन्द गर्नुहोस् जुन हामी केही समयको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौं, तर हामी मात्र यो मात्र पाउँदछौं। प्रयोग गर्नुहोस्।
Este पृष्ठभूमि अनुप्रयोगहरू बन्द गर्ने आम चाल आईओएस ब्याट्रीमा अतिरिक्त ड्रेनबाट बच्न निश्चित समयमा प्रयोग भइरहेको छैन जुन कम्प्युटरहरूको अपरेसनबाट आएको हो। डेस्कटपहरूमा, हामीसँग खुला अधिक अनुप्रयोगहरू, प्रोसेसरले अधिक काम गर्दछ र त्यसैले, अधिक ब्याट्रीले उपभोग गर्दछ। यद्यपि एप्पलको मोबाइल ओएसले यो प्यारामिटर प्रयोग गर्दैन, र त्यसैले यो अनुप्रयोगहरूलाई बन्द गर्न सल्लाह दिइदैन यदि हामी यसलाई छोटो समयमा प्रयोग गर्यौं भने। त्यसोभए IOS ले कसरी काम गर्दछ?
धेरै सरल। जब तपाइँ एउटा बन्द गर्नुहुन्छ IOS मा अनुप्रयोग, तपाईं यसलाई र्यामबाट हटाउनुहुन्छ। यसले ब्याट्री खेर फाल्छ। साथ साथै यसलाई पुन: सक्रियणको रूपमा यदि तपाईंले यसलाई पछि खोल्नुभयो भने। दुबै प्रक्रियाहरूले यसलाई पृष्ठभूमिमा राख्न भन्दा बढि खर्च गर्छ, किनकि हामी वास्तवमै वास्तविक "पृष्ठभूमि" को बारेमा कुरा गरिरहेको छैन। आईओएस मल्टिटास्किंगको अपरेसनले एप्सलाई बनाउँदछ जुन हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौं समयमै स्थिर हुन्छन्, यस्तै प्रकारले कि जब हामीले अनुप्रयोगमा फेरि बन्द नगरी तिनीहरू पहुँच गर्दछौं, तिनीहरू त्यस्तै हुन्छन् जसरी हामीले उनीहरूलाई छोडेका थियौं। तर पृष्ठभूमिमा कुनै उपभोग भएको छैन।
वास्तवमा, यो केवल GPS, अडियो रेकर्डिंग वा संगीत प्लेब्याकमा देखा पर्दछ। र ती सबैले तपाईंलाई ब्याट्रीमा अर्को प्रतिमा देखाउँछन् पृष्ठभूमिमा चलिरहेको संकेतहरू.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » के अनुप्रयोगमा बन्द हुँदा आईओएसमा ब्याट्री ड्रेन उच्च छ?
यहाँ हामीले केहि महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा कुरा गरेका छैनौं, कि यदि ती पृष्ठभूमिमा रहन्छन् र उदाहरणको लागि तपाइँसँग सफ्टवेयर एक विज्ञापन ब्यानर वा स or्गीत वा त्यस्तै वेबसाइटको साथ खुल्ला छ, यसले ब्याट्री मात्रै प्रयोग गर्दैन, तर डेटा पनि जारी राख्दछ!
जे एन्टोनियो भन्यो
म भन्दछु कि सब भन्दा सहि कुरा भनेको भनेको छ:
ios7 ले कुनै आईओएस भन्दा बढी ब्याट्री खपत गर्दछ
मेरो लागि सबैभन्दा खराब! म एक हजार पटक दोहोर्याउनेछु कि iOS6 ninugno को रूपमा
J एन्टोनियोलाई जवाफ दिनुहोस्
म दोहोर्याउनेछु *
एडुआर्डो द्रुत भन्यो
Eduardo द्रुतलाई जवाफ दिनुहोस्
हा! यो हो कि तिनीहरूले आईओएस about को बारेमा भनेका थिए जब हामी आईओएस went मा गएका थियौं, आईओएस when पछि जब हामी आईओएस and मा गयौं, र त्यसैले यो जारी रहनेछ, मैले पढेको अनुसार, आईओएस सबैभन्दा खराब हाहााहा थियो र अब म यी उत्तरहरू देख्छु किनकि यसले मलाई हाँस्न बनाउँदछ, यदि तपाईं नयाँ आईफोन / आईप्याड युनिट अपग्रेड वा खरीद गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने अनुकूल गर्न अरू कुनै ठाउँ छैन
Sundarkness लाई जवाफ दिनुहोस्
एकचोटि तपाईले एउटा लेख प्रकाशित गर्नुभयो वा मलाई थाहा छैन यदि मैले यसलाई अर्को ब्लगमा पढेको थिएँ भने, यदि तपाईले फेसबुक अनुप्रयोगको पृष्ठभूमिमा अपडेट निष्क्रिय गर्नुभयो भने यसले ब्याट्री खपत कम गर्‍यो, मैले यो गरें, र ब्याट्री खपत पर्याप्त कम थियो, यसले म दिनभर ब्याट्री चल्छ। म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु यो गर्नुहोस्।
एक ट्विटर प्रयोगकर्ता Jarocho (@ कार्लोसफेयरर) भन्यो
त्यो सँधै मिथ्या हो, र मलाई यो आवश्यक छैन जस्तो लाग्दैन, यसको लागि तपाईं आफ्नो चार्जरलाई आफूसँग लैजान सक्नुहुनेछ र यसलाई सकेटमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ, हैन?
एक ट्विटर प्रयोगकर्ता Jarocho (@ CarlosFerreer) लाई जवाफ दिनुहोस्
आईफोनबाट नि: शुल्क कोपा डेल रे (रियल म्याड्रिड - एफसी बार्सिलोना) को फाइनल कसरी हेर्नुहोस्